MOTOR FIASA Y2 - reducers, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta, reducer hafainganana, variatera, kojakoja helika, kobam-baravarankely, boaty fiompiana, boatin-traktera, kodiarana kamiao, boaty kankana
MOTOR Y2 andiany
Home / Motor / Y2 MOTORS SERIES
Y2 Fampidirana ankapobeny
Y2 andian-dahatsoratra asotronika dingana telo, novolavolaina tamin'ny teknika vaovao, nohavaozina sy manavao ny vokatra miorina amin'ny motera Y series.
Y2 andiana motera dia amina endriny voaisy tombo-kase ary karazana cooled an'ny mpankafy, karazana tranom-borona ary endrika amam-bika ary tsara ny bika aman'endriny, firafitra mifangaro, tabataba ambany, fahombiazana lehibe, torolàlana lehibe, fampisehoana manomboka tsara, fikojakojana mora, sns… raiso ny insulation kilasy F ary natao ho rafitra fanombanana ny rafitra insulation mifanaraka amin'ny fanao iraisam-pirenena.
Y2 andiana motera dia azo ampiharina betsaka amin'ny fitaovam-pitaterana isan-karazany toy ny fitaovan'ny milina, blowers, paompy, boaty, compresseur, mpitatitra, milina fambolena sns.
Temperature ambient: 15 ℃ ≤≤40 ℃ .Altitude: tsy mihoatra ny 1000 metatra miala ny haavon'ny tombo-kase.
Naoty naoty: 380V. Naoty matetika: 50HZ,
Fifandraisana: ny fifandraisana Y dia noraisina ho an'ny motera ambanin'ny 3KW (tafiditra ao amin'ny 3KW) ary ny fifandraisana △ dia raisina ho an'ny hafa ambonin'ny 4KW (tafiditra ao amin'ny 4KW) .Ny anjara asa: rafitra miasa mitohy (S1).
Fitaovana kilasy F, ny fiakaran'ny maripanan'ny stator miolakolaka dinihina amin'ny 80K (amin'ny alàlan'ny fomba fanoherana).
Kilasy fiarovana: amin'ny vatana lehibe dia IP54, eo amin'ny boaty terminal dia mety hahatratra IP55. Fomba fampangatsiahana: IC411.
Ny fametrahana ny motera dia mifanaraka amin'ny Toro IEC34-7. Misy fandaminana fototra efatra aseho toy ireto latabatra sy tarehimarika manaraka ireto.